Sambany nisy fampiofanana ho an'ny mpisehatra eo amin'ny teatra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fampiofanana ireo mpiofana eo amin’ny sehatry ny teatra sy fanamafisam-pahaizana ho an’ireo mpisehatra
Sambany teo amin’ny tantaran’ny teatra Malagasy no nisy fivoriana goavambe ahitana ireo solon-tenan’ny mpanao teatra rehetra manerana an’I Madagasikara toy izao. Hatrizay mantsy dia fiofanana eny ifotony no natao, na ihany koa ho an’ny faritra vitsivitsy ihany. Tamin’ity indray mitoraka ity dia nomena vahana ireo mpisehatra rehetra avy any amin’ny faritra 22, izay miisa 43.
Mizara roa ny fiofanana. Misy ny fiofanana ho an’ny mpampiofana ary ny faharoa dia fanamafisam-pahaizana ho an’ireo tompona tropy.
Fiofanana ny mpampiofana (formation des formateurs), izay ataon’ireo mpilalao (acteur-comédien), iarahana amin’i Mbato Ravaloson. Tanjona amin’izany ny hampahafantarana azy ireo ny atao hoe teatra malagasy, ny fanamafisana ny fahaiza-milalao fa eo ihany koa ny fampianarana amin’ny ankapobeny ny fomba fanoratra rehefa hamorona teatra. Isany vina goavana moa ny hizaran’ireo avy niofana ny fahaizany amin’ny mpilalao avy any amin’ny faritra misy azy avy rehefa vita izao fiofanana izao.
Fanamafisam-pahaizana ho an’ireo tompona tropy. Ity fiofanana ity dia niarahana tamin’i Henri Randrianierenana. Izy ireo kosa dia hofanina momba ny fampandrosoana ny indostrian’ny teatra amin’ny ankapobeny, fandrindrana ny fampisehoana, ny doka-varotra momba izany, ireo asa rehetra mety ho ateraky ny indostrian’ny teatra, sy ny sisa.
Maharitra dimy andro ny fiofanana ka tsy hifarana raha tsy amin’ny 24 novambra. Notanterahina androany 20 novambra ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy, izay nahitana ireo tompon’andraikitra ambony rehetra avy ao amin’ny Ministeran’ny Kolontsaina, Fampiroboroboana ny Asa Tanana sy ny Fiarovana ny Vakoka, ary ny Mpisolo tena avy amin’ny Vondron’ny Firenena mampiasa ny Teny Frantsay (OIF).
Betsaka sahady ny tsoa-kevitra nivoaka nandritra ny fanokafana ka isany nibahana tamin’izany ny tsy fahampian’ny foto-drafitr’asa entina ampandrosoana ny teatra sy ny fampisehoana, ny tsy fahafantaran’ny tanora amin’izao fotoana izao ny atao hoe teatra, ny firoboroboan’ny kolontsaina avy any ivelany, indrindra ny horonantsary, fa eo ihany koa ny tsy fahampian’ny fiofanana ho an’ireo mpanoratra sy mpilalao. Santatra ambava-rano tokoa moa izao tetik’asa fiofanana notanterahin’ny ministera izao raha ny sehatry ny teatra no resahina. Mbola betsaka ny vina manaraka fa dia natomboka tamin’ny fanomezana aim-baovaon’ny teatra aloha izany tamin’ity indray mitoraka ity.